Ciidanka xooga oo kordhiyay baacsiga argagixisada: SAWIRO - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Ciidanka xooga dalka gaar ahaan kuwa gobolka Shabeelaha hoose ayaa xoojiyay baacsiga argagixisada oo u diidey inay is urursadaan si ay u dhibaateeyaan ummada Somaliyeed. Waxa baryahan xooga la saaray sidii fadhi loogu diidi lahaa.
Deegaanada laga xoreeyay argagixisada ayaa waxa ka mida Bariire, Aw-dheegle, Mubaarak iyo Janaale. Ciidanka oo raxan raxan u socda ayaa duhur cad mara deegaano horleh.
Gaashaanle C/raxmaan Shiikh Cumar ayaa sheegay in ay doonayaan in Shacabka Ku nool Awdheegle, Mubaarak iyo Jannaale ee Gobolka Shabeellaha Hoose ay ka dulqaadaan ,isla markaana qorshahaas uu yahay mid xilligaan geba-gabo ah.
Todobaadyadii la soo dhaafay ayaa howlgallo ay sameeyeen Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee DANAB waxa ay la wareegeen deegaano ka tirsan Shabeellaha Hoose sida Sabiib Caanoole iyo deegaanka Bariire oo ay horay dhiiga uga jaqayeen dhiigmiiratada kooxda gaaleynta ee shabaab.